Windhill Farm - I-Airbnb
Ifama sinombuki zindwendwe onguLucy
Indlu yasefama ikwifama yeehektare ezilishumi enamahashe kunye neenkukhu. Kukho iindlela zokuhamba efama kwaye kukuhamba imizuzu eli-10 ukuya e-Afton State Park. Iimbono ezintle zezakhiwo zasefama kunye namadlelo.
Kufuphi neAfton Alps, Stillwater, Hudson, WI, kunye ne-3M headquarters. Imizuzu engama-30 ukuya eSt.
Indawo entle yokukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, kunye negalufa okanye ukutyibiliza ezantsi eAfton Alps. Isiseko esihle sokuphonononga i-St. Croix River Valley kunye nayo yonke into enayo. Yindawo enoxolo kwaye intle yokuphumla.
Abakhweli bebhayisikile basuka macala onke bezokuhamba ngeebhayisekile kwiinduli zaseAfton. I-Afton State Park ibandakanya iilwandle, ukuhamba kwiindawo ezibuyiselweyo okanye ecaleni komlambo, kunye ne-snowshoe kunye neendlela zokuhamba ze-ski ebusika. I-Deep skiing yimizuzu emi-5 phantsi kwendlela. Ukuloba iTrout okanye ukukhwela inqanawa kuMlambo iKinnickinnic kufutshane neWisconsin. Idolophu encinci yaseAfton ineevenkile ezimbalwa, ibha yewayini, kunye nevenkile ye-ice cream ethandwa kakhulu. Imizuzu eyi-10 ukuya e-Hudson, WI kunye nemizuzu engama-20 ukuya e-Stillwater, MN okanye ePrescott, WI. Iindlela zokutyibiliza ebusuku ebusuku eLake Elmo. Ukuhamba intaba kwindawo ekufutshane yaseBelwin Conservancy. Imizuzu engama-20 ukuya kwikomkhulu le-3M.
Umnini uhlala kufutshane kwaye ukhathalele iinkukhu kunye namahashe yonke imihla.
Kukho umrhumo wesilwanyana sasekhaya kwizinja ezixabisa i-100 yeedola.